Tena mora ianao afaka manakana votoaty olon-dehibe amin'ny iPhone sy iPad-n'ny zanakao | iPhone News
Miguel Hernandez | 19/05/2022 19:00 | iPhone, Fampianarana sy torolàlana, maro
Ny fitaovana finday, na iPhone, iPad na karazany hafa, dia azon'ny ankizy kely amin'ny fahatanorana sy ny fahatanorana. Ny fanamafisana haingana an'ity karazana fitaovana ity dia mitondra azy ireo akaiky kokoa amin'ny vanim-potoana nomerika, miditra amin'ny karazana fampahalalana rehetra. Ny olana, indraindray, dia ny ankamaroan'ny votoaty azo jerena amin'ny Internet dia mifantoka mivantana amin'ny olon-dehibe, zavatra mitranga amin'ny fahitalavitra ihany koa.
Noho izany dia azonao atao ny manakana mora foana ireo karazana votoaty ho an'ny olon-dehibe toy ny pejin-tranonkala, sarimihetsika ary mozika mba hisakanana ny ankizy tsy hiditra amin'izany tsy misy fanaraha-maso.
1 Fotoan'ny efijery, ny fifehezana ray aman-dreny iOS sy iPadOS tsara indrindra
2 Ahoana ny fomba fampandehanana ny fotoana efijery
3 Mametraha fetra ary sakano ny atiny ho an'ny olon-dehibe
Fotoan'ny efijery, ny fifehezana ray aman-dreny iOS sy iPadOS tsara indrindra
Ampiasao ny fotoana Izy io dia endri-javatra izay noresahintsika imbetsaka ary raha ny marina dia nitombo ny endri-javatra na ny fahaiza-manaony miaraka amin'ny dikan-teny iOS vaovao. Be dia be, ka rehefa manomboka iPhone vaovao ianao, ny iray amin'ireo dingana voalohany amin'ny resaka fanamafisana dia ny an'ity fampiasa ity, raha manapa-kevitra ny hampavitrika azy ianao, mazava ho azy.
Noho ny antony mazava, ny olon-dehibe iray dia tsy voatery hitaky fanaraha-maso ny fampiasana ny iPhone na iPad-ny, mainka fa amin'ny resaka famerana ny votoaty sasany, na izany aza, manao izany izy ireo. Afaka manampy antsika amin'ny fahafantarana amin'ny fomba lalina ny fomba ampiasantsika ny iPhone.
Na izany aza, fotoana fampiasana Nivoatra ho lasa singa tena ilaina ary nanampy tamin'ny fanaraha-mason'ny ray aman-dreny ny iOS sy ny fitaovana macOS amin'ny ankapobeny, manamora kokoa ity asa ity ho an'ny ray aman-dreny izay maniry ny zanany hifandray aloha amin'ny teknolojia, mametraka fetra sasany izay manome fanampin'ny fitoniana amin'ny trano.
Izany no antony tianay haseho anao ny fomba ampiasao araka ny tokony ho izy fotoana fampiasana mba hanakanana na hanaraha-maso ny fidirana izay ataon'ny kely indrindra amin'ny trano amin'ny votoaty omen'ny Internet ho azy ireo.
Ahoana ny fomba hanatratrarana fotoana fampiasana
Ny dingana voalohany, mazava ho azy, dia ny fampandehanana ity fampiasa ity mba ahafahantsika mampifanaraka ny masontsivana azy ary noho izany dia manatanteraka ireo fanitsiana izay mahaliana antsika. Ho an'ity dia handeha amin'ny fampiharana izahay Fikirana amin'ny iPhone na iPad, ary amin'ny iray amin'ireo pejy voalohany ho hitantsika mampiasa fotoana. Raha tsy mahita ny safidy izahay, dia mampahatsiahy anao izahay fa ity fampiharana ity dia manana bara fitadiavana eo an-tampony, izay ahafahantsika manoratra fotoana fampiasana ary ho hitantsika ao anatin'ny indray mipi-maso izany.
Rehefa ao anatiny dia miseho ny safidy activate "fotoana fampiasana", izay ahafahantsika mahazo tatitra isan-kerinandro miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fotoana fampiasana sy mamaritra ny fetran'ny rindranasa tiantsika hotantanana. Ireo no fototra fampiasa amin'ny mampiasa fotoana:
Tatitra isan-kerinandro: Jereo ny tatitra isan-kerinandro miaraka amin'ny angona momba ny fotoana fampiasana.
Ny fe-potoana fitsaharana sy ny fetra fampiasana fampiharana: Hamaritra fotoana iray hialana amin'ny efijery ianao ary azonao atao koa ny mametraka fetran'ny fotoana ho an'ireo sokajy tianao tantana.
Fepetra: Azonao atao ny mametraka fameperana mifototra amin'ny firafitry ny atiny mazava, ny fividianana, ny fampidinana ary indrindra indrindra, ny fiainana manokana.
Kaody fotoana fampiasana: Azonao atao ny mitantana ny fotoana fampiasana mivantana avy amin'ny iPhone na mampiasa kaody amin'ny fitaovana mba hanomezana alalana ny hetsika sasany.
Raha vantany vao mihetsika izany, dia hanontany antsika izy raha antsika ny iPhone, na an'ny zanatsika, raha toa ka mametraka izany ho iPhone ho an'ny zanatsika isika, dia ho afaka hanitsy ny fanaraha-mason'ny ray aman-dreny bebe kokoa noho ny mahazatra. fihetsika narahina Hanontanian'izy ireo anay ny fanamboarana sasany:
Mametraha fe-potoana fampiasa izay azontsika amboarina avy hatrany.
Mametraha fetra fampiasana fampiharana isan'andro. Rehefa tratra ny fetran'ny fampiasana isan'andro dia hangataka kaody na fanomezan-dàlana ahafahana manohy mampiasa ilay fitaovana na hanitarana ny fotoana fampiasana.
Fepetra ny votoaty sasany.
Mametraha fetra ary sakano ny atiny ho an'ny olon-dehibe
Efa noresahinay tamin'ny fotoana hafa ny fomba fametrahana fetra fampiasana vonjimaika amin'ny fampiharana iOS, noho izany dia hifantoka amin'ny famerana sy famerana ny fidirana isika anio, arakaraka ny karazana atiny, izany hoe, sakano ny atiny olon-dehibe na mibaribary amin'ity iPhone na iPad ity.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mametraka fameperana amin'ny fametrahana rindranasa, amin'izany fomba izany, hanakana azy ireo tsy hametraka rindranasa sasany ahafahan'izy ireo miditra amin'ny votoaty lehibe na mazava. Mba hanaovana izany dia hanaraka ity lalana manaraka ity izahay:
Ampiasao ny fotoana
Fividianana ITunes sy App Store
Miverena mividy sy misintona any amin'ny fivarotana: Aza avela
Mitaky tenimiafina: Mitaky foana
Fotoana izao hametrahana fetra amin'ny karazana atiny misy amin'ity iPhone na iPad ity, ary tena tsotra ihany koa izany:
Fameperana ny votoaty
Eto izahay dia manana safidy isan-karazany izay hazavainay mba hahafahanao manapa-kevitra ny tsirairay amin'ireo fandrindrany:
Votoaty azo atao amin'ny fivarotana:
Mozika, podcast ary voalohany: Afaka misafidy na votoaty sahaza ihany isika, na koa izay mibaribary
Horonantsary: Alefaso na vonoy ny fampisehoana horonan-tsary
Sarimihetsika mozika: Mametraha mombamomba mozika mifanaraka amin'ny taonany
Sarimihetsika: Afaka misafidy fetran-taona isika amin'ny fisafidianana sarimihetsika ao amin'ny magazay
Fandaharana amin'ny fahitalavitra: Afaka misafidy fetran-taona isika amin'ny fisafidianana sarimihetsika ao amin'ny magazay
Boky: Afaka misafidy isika na boky mety, na koa misy votoaty mazava
Fampiharana: Afaka misafidy fetran-taona isika hisafidianana sarimihetsika ao amin'ny magazay
Clips app: Ampidiro na vonoina ny clip app
atiny amin'ny Internet:
Fidirana tsy voafetra: Manome fahalalahana tanteraka amin'ny fidirana amin'ny Internet izahay
Fero ny fidirana amin'ny tranokalan'ny olon-dehibe: Afaka manakana tranonkala fantatra ho votoaty ho an'ny olon-dehibe isika, ary manampy ny sasany hamela foana, na hanakana foana
Ny votoatin'ny fikarohana amin'ny Internet: Avelao na sakanana
Fiteny mazava: Avelao na sakanana
Ary farany, andiana fampiasa ao anatin'ny Game Center izay tsy hojerentsika satria miankina amin'ny karazana mpampiasa tsirairay izy ireo. Amin'ity tranga ity, manoro hevitra izahay ny hanamafisana ny karazana fameperana na amin'ny atiny avela any amin'ny fivarotana, ary mazava ho azy fa amin'ny votoaty tranonkala, amin'izany fomba izany dia ho voafetra ny fidirana. Ho fiarovana bebe kokoa dia manoro hevitra izahay mametra ny fidirana amin'ny tranokalan'ny olon-dehibe, ampio ny tranonkala malaza indrindra amin'ny sakana amin'ny tanana.
Ary izany no mora ny mametra ny fidiran'ny ankizy ao an-trano amin'ny votoaty sokajiana ho "ho an'ny olon-dehibe" na mazava amin'ny pejy web sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Izany no fomba mora azonao manakana ny votoatin'ny olon-dehibe amin'ny iPhone sy iPad an'ny zanakao